नगर कार्यालयमा तालाबन्दी, गल्ती ढाकछोप गर्न वडाध्यक्ष अनशनमा | Citizen Post News
नगर कार्यालयमा तालाबन्दी, गल्ती ढाकछोप गर्न वडाध्यक्ष अनशनमा
२०७४ चैत्र २२ गते ११:५२
सर्लाही । बलरा नगरपालिकाका ५ जना वडा अध्यक्षहरुले नगरपालिकामा तालाबन्दी गर्दै रिले अनशनमा बसेपछि उनीहरुको कडा आलोचना भएको छ । नगरपालिकाकाको कार्यालय तालाबन्दी गर्दै रिले अनशनमा बस्ने ५ वटै वडा अध्यक्षहरु नेपाली कांग्रेस निकटका हुन् । नगरप्रमुख अभयकुमार सिंहका अनुसार सर्लाहीको सेर्वाछन्की टोलदेखि छतौनासम्मको ९ किमी हुलाकी सडक निर्माण कार्यमा उनका आफ्नै भार्इ पंकजकुमार सिंहको सवैभन्दा बढि जग्गा पर्न गएको छ ।
स्थानीय जनताहरुकै माग अनुसार भार्इ पंकजकुमारलाई उपभोक्ता समिति गठन गरी अध्यक्ष बनाइएको हो । उनले आफु बिकासको पक्षमा भएकै कारण जनताको चाहाना अनुरुप सडकको निर्माण कार्य सुरु गरेको बताउँदै भने, 'बिना कुनै आधार र प्रमाण अनियमितता र भ्रष्टाचार हुने भन्दै आशंका गर्नु तर्कसंगत छैन् ।' कहिल्यै नभएको बिकास निर्माणका काम आफुले गर्न थालेपछि जनताको राम्रो-नराम्रो जस आउनु स्वाभाविक भएको उनले बताए । भाइसँग २० वर्षअघि नै अंशबण्डा भइसकेको र आमभेलाले नै उनलाई समितिको अध्यक्षमा चयन गरेको बताए । उनले उपभोक्ता समितिमा परेको भन्दा पनि उसले गर्ने कामका आधारमा विरोध र समर्थन हुनुपर्ने बताए ।
भेलाले बनाएको उपभोक्ता समिति रोक्न नमिल्ने बताउदै उनले भने, 'नगरको योजना भएकाले उपभोक्ता समिति गठनमा सम्बन्धित वडाअध्यक्षको उपस्थिति जरुरी छैन् ।' बलरा नपा वडा नं. २ का स्थानीय लखिन्द्र सिंहले नगरको कार्यालयमा तालाबन्दी गरी रिले अनशन बस्नुको कुनै अर्थ नभएको बताए । उनले भने, 'हामीलाई बिकास चाहिन्छ र मेयरले सोही भावना बुझेर बिकास निर्माणका कामलाई तिब्रता दिनु भएको हो ।'
सेर्वाछन्की टोलदेखि छतौनासम्मको ९ किमी हुलाकी सडक निर्माण कार्यमा मेयरका भार्इ पंकजकुमार उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष भएकै कारण अनियमितता र भ्रष्टाचार हुने आशंका गर्दै नेपाली काँग्रेस निकटका ५ जना वडा अध्यक्षहरुले सोमबारदेखि नगरको कार्यालयमा तालाबन्दी गरी रिले अनशनमा सुरु गरेका हुन् । ८० लाख रुपैयाँ लागतको योजनामा सम्बन्धित वडा अध्यक्षलाई समेत थाहा नदिई समिति गठन गरिएकोले विवाद बढेको रिले अनशनमा बसेका वडा नं. १ का वडाअध्यक्ष सन्तोष कुमार सिंहले बताए ।